Aegis Microbe Shield - Anti-Bhakitiriya Technology | Karman Healthcare
Dzidza kuti nei iyo Aegis Microbe Shield System iri nani pane vamwe.
Aegis Microbe Shield Musiyano
Kupa dziviriro kubva kubhakitiriya, fungus uye nezvimwe zvinonhuwira.
Kudzora kana kubvisa hwema husina kunaka, kusviba, uye kuora kwechigadzirwa.
Izvo hazvigadzi nharaunda inokonzeresa inogadziriswa micro-zvipenyu.
Hazvibvise kana kufamba paganda.
Iko kuvimba kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu ekushandisa kwakachengeteka uye kunoshanda.
Hapana arsenic, tini, simbi dzinorema, kana polychlorinated phenols.
Inoshandiswa zvinobudirira mukuita kwakanyanya kuita uko kuchengetedzeka uye kuita kwakanyanya senge dzakachena dzimba dzemachira uye machira ekurapa.
Inobatwa vs. Isina kurapwa Surface
Iyo yakasarudzika AEGIS Microbe Shield ndeyekusimudzira machira iyo inopa iyo yakarapwa nzvimbo inoshanda antibacterial chiito. Iyo yekuuraya hutachiona chiito mhedzisiro yeiyo micro polymer yekupfeka, iyo inogadzira inoparadza mabhakitiriya, chakuvhuvhu, fungus uye avo mageneriki pavanosangana. AEGIS haina makemikari, haina kudyiwa nema microorganisms, uye inoramba ichishanda kune hupenyu hwechigadzirwa.
Eco-inoshamwaridzika & Antibacterial
Kusiyana nemamwe maanthibhakitiriya, iyo AEGIS Microbe Shield haikurudzire kugadziriswa kwehutachiona. AEGIS inert, hypoallergenic, uye isiri-chepfu.
Microbe Shield Inodzosera Kukura Kwehutachiona
Sechiratidzo chiri kurudyi chinoratidza, Aegis Microbe Shield inoshanda sedanda remapfumo kudzivirira kubva kukukura kwehutachiona. Nekuda kwavo kwakasarudzika kwemakemikari bond (yakasungwa covalent bond) iyo yakasungwa polymer haina kusungunuka kana kugadzikana. Chisungo chakasarudzika chinoguma mu ÆGIS antimicrobial polymer ichiva chikamu chakakosha cheiyo substrate.
Imwe pfungwa ya “AEGIS® Anti-Microbial Shield"
Pingback: Iwo Akanakisa Kukwira Bhutsu & Shangu muna 2018 - Yedu Yepamusoro gumi - BestSpy